Axmed Madoobe oo mar kale maanta gaaray Dhoobley – Hornafrik Media Network
Axmed Madoobe oo mar kale maanta gaaray Dhoobley
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo ay wehliyaan xubno ka tirsan labada gole ee maamulkiisa iyo saraakiil ciidan ayaa maanta gaaray magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa waxaa la sheegay in Dhoobley uu u tegey sidii uu tababar ugu soo xiri lahaa ciidamo cusub oo ku biiraya daraawiishta Jubbaland, waana safarkii labaad oo maalmo gudahood uu ku tago Dhoobley.
Socdaalkii kan ka horeeyey ee uu ku tegey Dhoobley ayaa waxaa la sheegay in halkaas uu ka hir geliyey xarun ciidan oo lagu tababaro ciidamada cusub ee Jubbaland, isagoo maalmo kadib ku laabtay Kismaayo, halkaas oo uu ka furay kalfadhiga baarlamaanka maamulkiisa.
Khudbad dheer oo uu ka jeediyey furitaankii kalfadhiga ayaa waxa uu eedeyn badan ugu jeediyey dowladda federaalka oo khilaaf xoog leh uu soo kala dhex galay wixii ka dambeeyey markii ay soo bilaabatay qabanqaabada dib u doporashadiisii seddaxaad ee hoggaanka Jubbaland.
Sidoo kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa khudbadiisii maalin ka hor dowladda federaalka uga codsaday in si sharuud la’aan ah ay ciidamadeeda ugala baxdo gobolka Gedo, si loo amba qaado wadahadal ay iskugu yimaadaan labada dhinac ee Jubbaland iyo dowladda dhexe.
Faahfaahino ka soo baxaya qaabkii loo abaabulay weerarkii Cabdalla Xamduuk
Wasiirka arrimaha dibadda oo ka hadlay xiisadda Soomaaliya iyo Kenya